Suuqgeynta Faleebo Qeybta 1aad: Yaa Daneeya?
Arbacada, Agoosto 18, 2010 Sabtida, Oktoobar 18, 2014 Douglas Karr
Haa, waxaan qorsheynayaa inaan qoro qaybo mustaqbalka ah taxanahan taxanaha ah ee suuq-geynta faleebada. Laakiin, xitaa haddii aanan sameyn, qiyaasi waxa: cinwaanka wali wuu shaqeynayaa. Qaybta koowaad ee ololaha suuqgeynta faleebada ah ayaan go'aan ka gaarin waxa la qoro. Ma ahan xulashada magac domain ama sameynta bogga degitaanka. Ma aha dejinta foomamka xiriirka iyo otomaatigga ololaha. Qaybta 1 ee olole kasta oo faleebo ah ayaa lagu ogaanayaa cidda dhab ahaan danaynaysa waxaad leedahay.
Go'aaminta cidda daryeeleysa ayaa si qumman loo sheegi karaa: yaad dooneysaa inaad daryeesho. Waxaad ka maqleysaa xayeysiinta, isku xirka, iyo tababarayaasha ganacsiga meel kasta - ka hel niche. Tani si gaar ah ayey muhiim ugu tahay suuqgeynta faleebada maxaa yeelay kahor intaadan qubin waxaad ubaahantahay hogaamin; iyo si aad u hesho hoggaamintaas waxaad u baahan tahay inaad bixiso wax qiimo leh; oo sidee ku ogaaneysaa waxa qiimaha leh ilaa aad ka ogaaneyso cidda iibsaneysa?
Taasi waa sax, “iibsashada.” Wajaho, inkasta oo aadan weydiisanayn inay furaan buuga jeebkooda, waxaad dadka weydiisaneysaa inay wax kaa iibsadaan –waxaa suura gal ah inay ka kooban yihiin waxyaabo aad soo saartay oo faa'iidadooda ah. Hadda, kuma iibsadaan lacag. Lacagta aqoonta ka iibsata suuqleyda aqoonta u leh maaha doolar iyo senti. Lacagtu waa macluumaadka lagala xiriirayo rate sicir bararkuna waa cirka sare.
Qasacda soodhaha ayaa loo isticmaali jiray nickel, sax? Run, iyo cinwaan emayl sax ah ayaa loo isticmaali jiray gelitaanka buuga martida (xusuusnow kuwa). Mar dambe ma ahan. Raadin kasta oo ku saabsan daalacashada shabakadda waxay wadataa buug jeeb ah oo ay ka buuxaan xogtooda - cinwaanka iimaylka, lambarrada taleefannada, iyo xitaa tirada dadka. Kuwa weydiiya xogta xiriirkaas iyaga oo aan bixin wax qiimo ah oo soo noqnoqonaya waxay la mid yihiin tuugada suuqgeynta internetka, oo ka baryaya lacag si khaas ah nimcadiisa Halkii aad ka dawarsan lahayd, samee heshiis cadaalad ah. Sii wax qiimo leh sida talooyin bilaash ah oo laga helo qorayaasha la qadariyo, a warqad cad oo bilaash ah PDF, seminar ama dhacdo bilaash ah, ama shaqsiyadeyda aan ugu jeclahay, an e-dabcan. Iyo, inta badan ee aad rabto inaad ku dalacdo (ie xogta faahfaahsan ee aad weydiiso hogaanka si aad u bixiso) qiimaha badan ee ay tahay inaad abuurto. Haddii kale, waxaad isku arki doontaa adiga oo iibinaya soodhaha biilka $ 10 iyada oo aanad qaadin dad badan.
Hadda, waa "yaa" qayb ka mid ah kan daneynaya taas oo runtii bilaabeysa inay muhiim tahay. Waad aragtay, qiimaha waxa aad bixineysaa wuxuu si toos ah ula xiriiraa cidda aad u fidineyso. Haddii aad ogtahay cidda dhagaystayaashaadu yihiin, markaa (oo markaa keliya) ma horumarin kartaa badeecad ay diyaar u yihiin inay ku iibsadaan qiimaha macluumaadka xiriirkooda. Asal ahaan, waa inaad waqti badan ku bixisaa horumarinta sheyga aad qorsheyneyso inaad u iibiso xogta xiriirka sida aad u sameyso sheyga aad qorsheyneyso inaad lacag ku iibiso. Si kastaba ha noqotee, tii hore la'aantii rajo yar ayaa laga qabaa kan dambe.
Marka, haddii aad ka fikirayso inaad bilowdo olole faleebo ah, is weydii "yaa daneeya?" Qeex siinta wax bixinta taas oo u qalanta waxa aad weydiisaneyso soocelintooda – ha noqonin pauper marketing. Iyo, markay iibsadaan, hubso inaad wax gayso.
Tags: suuqgeynta faleebo
Kahortaga Waxkasta oo Bulsheed? Runtii?
Waxaan u maleynayaa inaan u maleyno inaan si fiican u fikirno I si fiican ayaan u daryeelayaa iyaguna iyaguna will Aad ayey muhiim u tahay in la ogaado dhagaystayaashaada oo aad ogaato cidda danaynaysa Qoraal wanaagsan.